Mbappé oo u soo jeestay in uu gabi ahaanba burburiyo RIKOORRADA xidigaha Messi iyo Ronaldo, kaddib markii….. – Gool FM
Mbappé oo u soo jeestay in uu gabi ahaanba burburiyo RIKOORRADA xidigaha Messi iyo Ronaldo, kaddib markii…..
(Yurub) 24 Abriil 2019. Weeraryahanka reer France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa ku guuleystay inuu ka saro maro xidigaha Messi iyo Ronaldo.
Wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in Kylian Mbappé uu kaga sara maray xidigaha Cristiano iyo Messi tirada goolasha ay ku dhaliyeen da’aada 21 jirka.
Mbappé oo 20-ka bishii Diseembar ee lasoo dhaafay noqday 20 jir ayaa ila iyo haatan dhaliyay 94 gool, waayihiisii kooxda Monaco iyo kooxda uu haatan ku sugan yahay ee Paris Saint-Germain.
Messi ayaa dhaliyay 50 gool, isaga oo jira da’aada 21 jirka, halka kaliya 35 gool uu ku dhaliyay Cristiano Ronaldo, kulamadii uu kaga soo muuqday xiligaas xulkiisa qaranka iyo kooxihii uu u soo ciyaaray.
Da’ayarkan reer France ayaa si weyn kaga qeyb ka qaatay wacdaradii kooxdiisii hore ee Monaco ay ka dhigtay tartamada kala duwan ee qaarada yurub, gaar ahaan Champions League, kahor inta uusan ugu dhaqaaqin Paris Saint-Germain qiimo dhan 180 milyan oo euros.
Kylian Mbappé ayaa sidoo kale ka caawiyay xulkiisa qaranka Faransiiska ku guuleysiga Koobka Aduunka 2018 ee ka dhacay dalka Russia, wuxuuna xubin muhiim ah ugu ahaa dhanka weerarka.
XOG LA HELAY: Ciyaartoyda Man United oo kooxda laga ceyrin doono haddii kulanka caawa ee Man City.....(War farxad wayn u ah Liverpool)